Banjino i Kristy dia ho tahaka Azy ianao
"Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an 'ny Lahitokana avy tamin'ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana." — Jao. 1:14.
Mamita ny iraka nampanaovina azy ny taonjato nifandimby. Samy nanana ny asany ny fotoana rehetra. Samy nitondra ny enta-mavesany ho any amin'ny mandrakizay izy ireo tsirairay avy (...). Mbola miandraikitra ny fanjakana ety an-tany hatrany Andriamanitra. Any an-tanàn-dehibe Izy. Mandinika ny masony, mikimpikimpy ny hodi-masony, mibanjina ny zavatra ataon'ny zanak'olombelona. Tsy tokony hiteny mihitsy isika hoe nisy Andriamanitra, fa hoe kosa misy Andriamanitra. Hitany ny fahalavoan'ny tsintsina iray, ny ravina izay mihintsana avy amin'ny hazo, ary ny mpanjaka izay nesorina hiala amin'ny seza fiandrianany. Eo ambany fifehezan'ilay Tsy manam-petra avokoa izany rehetra izany. Samy miova avokoa ny zava-drehetra. Ny tanàna sy ny firenen-drehetra dia refesin' ilay mizana tsy mety manana fahadisoana eo an-tanan'Andriamanitra. Mamaky amim-pahamarinana tokoa izany. Ny zava-drehetra eto an-tany dia samy tsy miorim-paka, fa ny fahamarinana ihany no maharitra mandrakizay.
Eo imason'izao tontolo izao dia mety hoe malemy no fijery ireo manompo an'Andriamanitra. Toa milentika any anaty zavona no fijery azy ireo, kanefa rehefa mipoitra ny zavona manaraka dia hita fa tafakatra manakaiky ny lanitra izay azy izy ireo. Fiainana mandrakizay no omeko azy ireo hoy ny Tompontsika, ary tsy misy mahaisotra azy ireo amin'ny tanako. Na dia esorina amin'ny toerany aza ny mpanjaka, ka esorina ny firenena, ny fanahy izay mifandray amim-pinoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay. — YI, 29 Septambra 1903.
Afantohy amin'i Jesôsy ny masonao, ary amin'ny alalan'ny fibanjinanao Azy no hahatonga anao hitovy endrika Aminy. — AUCR, 1 Nôvambra 1904.